Teen Patti Royal (Online & Offline) 3.6.7 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 3.6.7 လြန္ခဲ့ေသာ3ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား ကာစီႏို Teen Patti Royal (Online & Offline)
Teen Patti Royal (Online & Offline) ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ဆယ်ကျော်သက် Patti: (အိန္ဒိယ Poker): 50K ကနဦးအခမဲ့ chip, နေ့စဉ်ဆုကြေးငွေ, မိတ်ဆွေများနှင့်အတူဆော့ကစား, ပြိုင်ပွဲများ, ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုသင်သည်လုံးဝအခမဲ့အွန်လိုင်းအော့ဖ်လိုင်းသို့မဟုတ်အခါ!
●အခမဲ့ chip: အခမဲ့ Chips သင့်ရဲ့ချစ်ပ်မြှင့်တင်ရန်တိုင်း 15 မိနစ်နှင့်နေ့စဉ်အပိုဆု။ သငျသညျကြီးတွေအနိုင်ရဖို့ခွင့်ပြုသောကြွယ်ဝစွာ-featured ဆုလာဘ်စနစ်။
●ဒီဂိမ်းထဲမှာဆယ်ကျော်သက်-Patti-match3 ဂိမ်း mode ကို Play ။
●ကိုအော့ဖ်လိုင်းဒါမှမဟုတ်အွန်လိုင်းအော့ဖ်လိုင်းစဉ် OR ကမ္ဘာတဝှမ်းတဲ့အခါမှာအွန်လိုင်းကနေမိတ်ဆွေများက / ကစားသမားနှင့်အတူကွန်ပျူတာ-player ကိုအတူ Play ။
●ဂိမ်း mode: Joker / Paplu, Muflis, AK47, JKQK, ဂန္ထဝင်ဆယ်ကျော်သက် Patti တို့ကိုလည်း Blackjack ။ အတူသို့မဟုတ်အင်တာနက်မပါဘဲအားလုံး Modes သာ။
●စာရင်းအင်းများ: Track နှင့်ကျယ်ပြန့်ဂိမ်း stats နှင့်သင်၏ဂိမ်းတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။
● Blackjack: တူညီသော app ထဲမှာ Blackjack Play ။
●အဆင့် & Leagues🏅: သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူ teenpatti လောကီသားတို့သည်အဆောင်လွှမ်းမိုးခြင်းနှင့်ထိပ်ကစားသမားဖြစ်လာသည်။
● 50,000 ချစ်ပ်တွေနဲ့ Start: 🎁🎁🎁🎁
● VIP အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်: VIP အဖွဲ့ဝင်များနှင့် VIP စားပွဲခံစားကြည့်ပါ
Teenpatti သည်ဤဘာသာစကားများကို support:
ZMist သင်သည်သင်၏ device ကိုပေါ်, ဘယ်နေရာမှာမဆိုအချိန်မရွေး, ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးကဒ်ဂိမ်းကစားပေးနိုင်ပါတယ်! အခုတော့စာရင်းဇယားရရှိနိုင်ပါနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကစားသမားရေကူးကန်နှင့်အတူ, သင်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူယှဉ်ပြိုင်ခြင်းနှင့်အသစ်သောကစားသမားစိန်ခေါ်နိုင်သည်! ZMist ကုန်ကျစရိတ်အခမဲ့ဂိမ်းနှင့်ပတ်သက်သောဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးဘို့အလူသိများသည်။
ဒီဂိမ်းကိုသာသာအပန်းဖြေရည်ရွယ်ချက်အဘို့ဖြစ်၏။ ဂိမ်းကိုမှန်ကန်ပိုက်ဆံလောင်းကစားဝိုင်းသို့မဟုတ်အစစ်အမှန်ပိုက်ဆံအနိုင်ရဖို့အခွင့်အလမ်းကိုကမ်းလှမ်းမထားဘူး။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကဘို့ငါတို့အသုံးအနှုန်းများ & privacy ကိုမူဝါဒအဖတ်ရှုပါ။
သင်တို့သည်ငါတို့၏ facebook စာမျက်နှာပေါ်တွင်အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူချိတ်ဆက်နိုင်သည်
မည်သည့်အကြံပြုချက် / ထင်မြင်ချက် / ပြဿနာများအတွက်, ကျေးဇူးပြု. Mailto: support@zeemist.com
Teen Patti Royal (Online & Offline) အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Teen Patti Royal (Online & Offline) အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Teen Patti Royal (Online & Offline) အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Teen Patti Royal (Online & Offline) အား အခ်က္ျပပါ
vivo-api စတိုး 8.05k 7.44M
Teen Patti Royal (Online & Offline) ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Teen Patti Royal (Online & Offline) အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 3.6.7
ထုတ်လုပ်သူ ZMist Inc
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://teenpatti-prod-http.zebralabs.in/pages/privacypolicy
App Name: Teen Patti Royal (Online & Offline)
Release date: 2019-07-31 18:18:10
လက်မှတ် SHA1: DF:EC:F9:93:D0:27:5F:E6:3A:F3:AE:D5:07:F6:3F:B2:0C:6B:AC:AA
ထုတ်လုပ်သူ (CN): prince
အဖွဲ့အစည်း (O): prince
Teen Patti Royal (Online & Offline) APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ